व्यावसायिक खेल, र पनि एक अवैतनिक, यो कि मांसपेशी निर्माण गर्न छोटो समयमा मदत एक विशेष आहार र पूरक बिना कल्पना गर्न गाह्रो छ। खेलाडीहरूलाई माझ लोकप्रियता बढ्दै प्राप्त gainer। यो के हो र यो कुन प्रयोग गरिन्छ? सम्मानित खेल प्रकाशनहरू यो कि सार्वजनिक घोषणा नवीन उत्पादन, हानिकारक छैन जो। तर केही विशेषज्ञहरु यस संरचना कि चेतावनी - एक ठोस रसायन, र यसको प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन। त्यसैले जो सही छ?
भाग रूपमा छानबीन छन्
Gainer - यो के हो? अंग्रेजी देखि शाब्दिक अनुवाद शब्द अर्थ ", प्राप्त बढाउनका निर्माण।" यो थपिएको एक प्रोटिन-कार्बोहाइड्रेट मिश्रण, कार्बोहाइड्रेट को दर पर्याप्त भएको प्रोटिन नाघ्यो जो छ प्रतिनिधित्व:
50-75% - एक फरक ग्लाइसेमिक इन्डेक्स (धेरै प्रजातिहरू) छ जो कार्बोहाइड्रेट। यो कारक मानव शरीर ऊर्जा अधिकतम रकम प्राप्त र मांसपेशिहरु मा glycogen एक आरक्षित गठन गर्न अनुमति दिन्छ।
50-15% - प्रोटीन। विशिष्ट प्रोटीन Gainer मा निहित, एमिनो एसिड को एक अधिकतम रकम संग शरीर आपूर्ति। यो वास्तवमा खेलाडीहरूलाई भारी व्यायाम पछि छिटो पुन: प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
विशेषज्ञहरु तपाईं राम्रो प्रोटिन पाचन प्राप्त गर्न सक्छन्, तर कार्बोहाइड्रेट संग संयोजन मा प्रयोग भन्छन्। यो जानकारी निकै खेलाडीहरूलाई बीचमा यो उत्पादन को लोकप्रियता वृद्धि हुनेछ।
तपाईं एक gainer चयन भने, यसको संरचना निम्न घटक मा उपस्थितिको तपाईंको ध्यान बारी सुनिश्चित:
Glutamine। विशेष एमिनो एसिड हर्मोन को संश्लेषण प्रोत्साहित गर्न सक्ने: टेस्टोस्टेरोन, विकास हर्मोन (HGH)। यो एउटा वास्तविक मांसपेशिहरु निर्माण गर्न मद्दत जो "ईटा" छ। साथै, मिश्रित को रक्त स्तर बढ्छ supercompensation प्रभाव ठीक गर्न खेलाडी मद्दत गर्छ।
Taurine - विशिष्ट मिश्रित, सक्रिय धेरै प्रक्रियाहरूको असर जो ऊर्जा चयापचय को शरीर मा र सीधा मांसपेशी तन्तु मा। पदार्थ creatine र धेरै अन्य यौगिकों को प्रभाव बढाने सक्षम। यो घटक धेरै लोकप्रिय छ: यो खेल पोषण र पेय पदार्थ को विभिन्न प्रणाली मा थपिएको छ।
Creatine। यो धीरज र बल विकास जुटाउने अपरिहार्य भनिन्छ यो एसिड छ।
केही निर्माता को पोषक तत्व मिश्रण थप्न विभिन्न भिटामिन र खनिज छन्, तर यी घटक तिनीहरूलाई बीच वास्तविक नेता हो।
मांसपेशी सेट बोसो छैन, ऊर्जा सफा कारण छ त Creatine, वस्तुतः कुनै बोसो समावेश गर्नुहोस्। पनि अक्सर विशेष इन्जाइमहरु समावेश - तिनीहरू सबै अन्य घटक को Assimilation उत्तेजित।
Gainer - यो के हो र कसरी शरीर कार्य गर्न? सक्रिय शरीरको वजन वृद्धि जहाँ खेल गतिविधिहरु मा एक धेरै महत्वपूर्ण कारक, विशेष गरी शरीर निर्माण - यो राम्रो पोषण कि ज्ञात छ। पोषक तत्व संरचना भारी भार सामना गर्न सक्छन् भनेर खेलाडीहरूलाई को दैनिक आहार समायोजन गर्न मुख्य डिजाइन गरिएको थियो। किन म gainer चाहिन्छ:
तुरुन्तै प्रशिक्षण सुरु गर्नु अघि एमिनो एसिड र कार्बोहाइड्रेट ब्यालेन्स लागि क्षतिपूर्ति गर्न। यो घटना मांसपेशी छिटो निर्माण गर्न मद्दत गर्ने बल प्रशिक्षण को प्रभाव विस्तार गर्ने डिजाइन गरिएको छ।
दोस्रो चरण लोड पूरा भएपछि कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको कमी भर्न छ। यो अवधिमा शरीर नितान्त थप उत्तेजना र ऊर्जा आवश्यक समयमा - यो तपाईं मांसपेशी कक्षहरूको वृद्धि सुनिश्चित, अधिक चाँडै वजन बढाउनका गर्न अनुमति दिन्छ।
उत्पादन वृद्धि समग्र ताप सेवन गर्न मद्दत गर्छ।
यो खेल मोड एउटा महत्त्वपूर्ण घटक रूपमा सेवा गर्दैछन्।
केही विशेषज्ञहरु द्वारा उल्लेख रूपमा, हाम्रो शरीर पचाउन सक्दैन र खाना सबै आवश्यक प्रोटीन र कार्बोहाइड्रेट प्राप्त, त्यसैले gainer लिइरहेको सुझाव दिन्छौं।
यो शक्ति सुट छ
Gainer - यो के हो र जसले यो उपयोगी? मान्छे दुबला काया त्यो या ectomorph लागि उपयुक्त। यी थपिएको संग, तिनीहरूले चाँडै समय एक अपेक्षाकृत छोटो अवधिमा मांसपेशिहरु पाउन सक्षम हुनेछ। तर, यस्तो उत्पादनहरू अतिरिक्त वजन भएका खेलाडीहरूलाई गर्न उपयुक्त हो - कार्बोहाइड्रेट सक्रिय adipose ऊतक मा सञ्चय छन्। उपयुक्त additives, छैन bodybuilders मात्र। तिनीहरूले पनि खेलाडी, खेलाडीहरूलाई, मुक्केबाज र अन्य खेलाडीहरूलाई प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको हो। कारण यो मानव धीरज वृद्धि र एक spasmolytic प्रभाव छ कि यौगिकहरु संग शरीर प्रदान प्रशिक्षण अघि एक विस्तृत आवेदन कि gainer गर्न।
त्यहाँ एक वैकल्पिक छ
तपाईं महंगा खेल पोषण किन्न सक्नुहुन्न भने, तपाईँले सजिलै घर Creatine तयार गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा - सम्झना केही घटक तिनीहरूलाई मा निहित पर्छ भनेर। हामी यी उपयोगी उत्पादनहरु प्रयोग ककटेल तयार:
प्रोटीन दूध, पनीर, दूध, अन्डा र अन्य उत्पादनहरु समावेश गर्दछ।
कार्बोहाइड्रेट-धनी केले, जाम, जाम, प्राकृतिक मह।
एक ककटेल लागि आधार: एक अम्लीय रस, दूध, दही।
मांसपेशी बल पुनर्स्थापना र गर्न मद्दत गर्नेछ निर्माण एक स्वस्थ पेय प्राप्त गर्न, तपाईं सबै सामाग्री मिश्रण र पीसने गर्न आवश्यक छ। दही को स्थिरता गर्न संरचना ल्याउन र आफ्नो स्वास्थ्य गर्न पिउन। यो विकल्प आफ्नो स्वास्थ्य गर्न हानि भय राख्ने समाप्त स्टक टिप्स लाभ वाला को wary छन् मान्छे, लागि आदर्श छ।
व्यावसायिक खेलाडीहरूलाई अझै पनि कारखाना समकक्षों खेल पोषण उत्पादनहरु रुचि याद गर्नुहोस्। एक लोकप्रिय थपिएको रचनाहरूको "मास Gainer" भनिन्छ हुन सक्छ। खेलाडीहरूलाई, विशेष गरी bodybuilders समीक्षा, मांसपेशी निर्माण गर्न मद्दत गर्छ सकेसम्म उत्पादन पूर्ण शरीर द्वारा बित्तिकै अवशोषित र छ भन्ने पुष्टि गर्नुहोस्। यसलाई त्यहाँ यस्तो खुशी सस्तो छैन त्यो सत्य हो।
प्रिय जवान खेलाडीहरूलाई, विभिन्न स्टक टिप्स लाभ वाला को प्रयोगबाट सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न, तपाईं सिफारिस उपचार र पर्याप्त औषधिको खुराक पालन गर्नुपर्छ भनेर सम्झना। तपाईं आफ्नो शरीर गहन प्रशिक्षण लोड छैन भने यो मामला मा, यो तपाईं बिल्कुल बेकारी हुनेछ।
कसरी घर मा एक गैर-रक्सी पिउने mojito तयार: सजिलो नुस्खा
संरचना, फोटो, समीक्षा: "Milkis" पिउन
व्यञ्जनहरु Rhubarb मूर्ख: लाभ र हानि
को जाडो लागि Stewed छाँट्दछ। एक स्वस्थ र स्वादिष्ट पेय लागि नुस्खा
कसरी आफैलाई फ्लैश खेल बनाउने?
के dumping छ: थाहा उपयोगी छ
Nikolai Ivanovich Lobachevsky: संक्षिप्त जीवनी, उपलब्धिहरू, आविष्कारहरू
Bayron Keri: जीवनी र क्यारियर
सौन्दर्य-Clivia - फूल हेरविचार प्रत्येक शक्ति
Inositol - यो के हो र कहाँ पाइन्छ गर्न? फार्मेसी मा Inositol: प्रयोगको लागि निर्देशन, सङ्केत गर्छ
सुन्निएको औंलाहरु: कारणहरू, निदान, उपचार। के औंलाहरु को सुन्निएको जोइन्टहरूमा यदि